Crito4| Zizawa's refuge
Crito: ‘အင်း တချို့ က ဒါကလည်း ရှင်းနေတာပဲလို့ ပြောကြမှာဘဲ Socrates။ ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်။’
Socrates: ‘ဒါပေမယ့် ငါ့လူ ဒို့အရင်တုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတခုဟာလည်း ငါ့အတွက်တော့ အရင်တုန်းကလိုပဲလို့ စိတ်ထဲထင်နေတယ်။ (ခုလည်း လက်ခံထားတယ်ပေါ့။) မင်းအတွက်ရော မှန်မမှန် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာ။ ဟေ့ လောကမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ကို ဦးစားမပေးသင့်ဘူး။ မှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာ အသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေးသင့်တယ်။ ဟုတ်သလား။ (not just living, but living well လို့ ဆိုတယ်။ Aristotle ရဲ့  Nichomachean Ethic ထဲက eudaimonia ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောချင်တယ်လို့ ယူဆတယ်။)
Crito: ‘ဒါလည်း ခုထိမှန်သေးတာပဲ Socrates။’
Socrates: ‘မှန်ကန် ကောင်းမွန်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်တယ်ဆိုတာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ၊ တရားနဲ့ညီစွာ နေထိုင်သွားတာကိုပြောတာ။ ဒါကိုလည်း မင်းလက်ခံတုန်းပဲမလား။ (living well, justly and finely)
Socrates: ‘ဒီတော့ ဒို့ခုသဘောတူပြီးသလောက်ကနေ ဆက်ရရင် ငါခုထောင်ကနေ ထွက်ပြေးတာ တရားလား၊ မတရားလားဆိုတာ ဒို့လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ။ အဲဒိကနေ တရားတယ်လို့ သဘောရရင် ဒီကနေပြေးဖို့ ကြိုးစားတာပေါ့၊ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီအကြံအစည်ကို စွန့်လွှတ်မယ်။ အစောပိုင်းက မင်းပြောခဲ့တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတို့၊ ပိုက်ဆံတို့၊ ကိုယ့်သားတွေကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တာတို့ ဆိုတာတွေဟာ လူတယောက်ကို ခုသေခိုင်းလိုက်၊ ပြီးရင် ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ ပြန်ရှင်ခိုင်းလိုက် လုပ်တတ်တဲ့ အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ပဲ ငါတော့ ထင်တယ် Crito ရေ။’ (ပြောချင်တာက ဒီကိစ္စတွေဟာ ဗလောင်းဗလဲ လုပ်တတ်တဲ့ အေသင်အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ သူကယူဆတယ်။)
ဒါပေမယ့် ဒို့အတွက်ကတော့ကွာ ဒါတွေထက် ဒို့စောစောက လေ့လာဆန်းစစ်မယ်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို argument တွေနဲ့ သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ မင်းပြောသလို အစောင့်ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ဒို့လွတ်အောင်လုပ်တာဟာ တရားသလား၊ မတရားသလားဆိုတာကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့်တာပေါ့။ ဒို့အသက်သေတာရှင်တာတွေကို ထည့်မစဉ်းစားသင့်ဘူး။ (အာဂ အဖိုးကြီးပါလား:D)
Crito: ‘Socrates ခင်ဗျားပြောတာ သိပ်လျော်ကန်တယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲ ကြည့်တာပေါ့ဗျာ။’
Socrates: ‘ဒါဆို ဒို့အတူ ကြည့်သပေါ့ကွာ။ ငါပြောတာကို တနေရာရာမှာ မင်းကန့်ကွက်ရင် ငါ့ကိုပြော၊ မင်းငါပြောတာ ယုံကြည့်လက်ခံလာအောင် ငါကြိုးစားဖျောင်းဖြကြည့်မယ်။ အဲ့သလို မဟုတ်ဘဲ သဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့ အေသင်မြို့ သားတွေရဲ့  ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး ငါ့ကို ထွက်ပြေးဖို့ မင်းခဏခဏ မတိုက်တွန်းနဲ့တော့၊ ဟုတ်ပလား။ ကဲခုတော့ မင်းဆန္ဒနဲ့ မဆန့်ကျင်ဘဲ မင်းသဘောတူတဲ့နေရာက စဖို့အရေးကြီးတယ်။ မင်းသဘောကျတဲ့ (စိတ်တိုင်းကျတဲ့) နေရာက စတာပေါ့ကွာ။ ပြီးတော့ ငါ့မေးခွန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီးဖြေပေါ့။’
Socrates: ‘ဒို့တွေဟာ သိသိနဲ့ တမင်သက်သက် ဘယ်တော့မှ မတရား မလုပ်သင့်ဘူး (never willingly act unjustly) လို့ပြောမလား၊ တခါတလေမှာတော့ (မတရား) လုပ်သင့်တယ်၊ တခါတလေမှာ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောမလား။ မတရားလုပ်တာဟာ ဘယ်တော့မှ မကောင်းဘူး၊ မမြင့်မြတ်ဖူးဆိုတာ အရင်အကြိမ်တွေကလည်း ဒို့သဘောတူခဲ့ပြီးသားမလား။ ဒါမှမဟုတ် (မတရားလုပ်တာ ဘယ်တော့မှ မကောင်းဘူး) ဆိုတာကို ခုလွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်ကမှ မှားတယ်လို့ သိရတယ်လို့ပဲ ပြောမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အစကတည်းက မှားနေတာကို တလျှောက်လုံး လက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောမလား Crito။ ဒါမှမဟုတ် ဒို့ခုလက်ခံယုံကြည်တာ ဟိုးအရင်က လက်ခံယုံကြည်ခဲ့တာတွေလို့ပဲ ပြောမလား။ အများက သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည် ဖြစ်စေ၊ လောလောဆယ် ခံနေရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ထက် ပိုဆိုးတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုး ခံရသည်ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်သာတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပဲ ခံရသည်ဖြစ်ဖြစ် မတရားလုပ်တယ်ဆိုရင် မတရားလုပ်သူဟာ ဘယ်လိုမှ မကောင်းဘူး၊ ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲ့သလို ပြောမလား မပြောဘူးလား။’
Socrates: ‘ဒီတော့ ဘယ်တော့မှ မတရား မလုပ်ရဘူးပေါ့။’ (And so one must never act unjustly.)
Crito: ‘ဘာဖြစ်ဖြစ် မလုပ်ရဘူး။’
Socrates: ‘ဒီတော့ ဘယ်တော့မှ မတရား မလုပ်ရဘူးဆိုရင် (အများအမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေကောင်း ဆန့်ကျင်နေမယ်) ကိုယ့်ကို မတရားလာလုပ်ရင်လည်း မတရား ပြန်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။’
Crito: ‘အဲ့လို ပြောရမှာပေါ့။’
Socrates: ‘ပီးတော့ဘာရှိဦးမလဲ။ (တယောက်ယောက်ကို) သွားထိခိုက်သင့်လား၊ မထိခိုက်သင့်ဘူးလား။ (Should one cause harm, or not?)
Crito: ‘မထိခိုက်သင့်ဘူးလို့ ယူဆရတာပဲ Socrates။’
Socrates: ‘ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆိုရင် အများကပြောနေသလို ကိုယ့်ကို လာထိခိုက်လို့ ပြန်ထိခိုက်အောင်လုပ်တာ တရားလား၊ မတရားဘူးလား။’
Socrates: ‘ဘာလို့ဆိုတော့ လူတယောက်ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တာဟာ မတရားမှုလုပ်တာနဲ့ ဘာမှမကွာဘူး၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။’
Socrates: ‘ကိုယ်မတရားလုပ်ခံရ၊ ထိခိုက်ခံရလို့ ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်ရနာကျင်ရ မတရားလုပ်တာကို ဘယ်တော့မှ လက်တုံ့မပြန်ရဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် သူများကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်ရဘူး။ ဒါကို သဘောတူတယ်ဆိုရင် Crito မင်းယုံကြည်မှုရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို သဘောမတူဘူးလို့ ပြောတာနဲ့ တူတူပဲဆိုတာ ရှင်းတယ်နော်။ (This is tricky. နားလည်သလောက်ပြောရရင် Socrates ကို အေသင် အာဏာပိုင်တွေက မတရားအမှုဆင်တာမို့ ထွက်ပြေးတာ မတရားရာ မရောက်ဘူးလို့ Crito ကယုံတယ်။ ဒါပေမယ့် မတရားလုပ်တာကို လက်တုန့်မပြန်သင့်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း Crito ကသဘောတူတဲ့အတွက် ဒီသဘောတူမှုဟာ သူအရင်ယုံထားတာနဲ့ (မတရား အမှုဆင်တာမို့ ထွက်ပြေးတာ မတရားမှု မမြောက်ဖူးဆိုတာနဲ့) ရှေ့ နောက်မညီတာကို Socrates ကထောက်ပြတာလို့ နားလည်တယ်။) ဒီတော့ မတရားမှုကို ဘယ်တော့မှ လက်တုန့်မပြန်သင့်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံတဲ့လူနဲ့ လက်မခံတဲ့လူကြားမှာ ဘုံရပ်တည်နိုင်တဲ့နေရာ common ground မရှိဘူးပေါ့။ (ချည်တဲ့ တုတ်တဲ့နေရာမှာ ပိုင်လိုက်တဲ့ Socrates ပဲ။ သူဆိုလိုတာက မတရားမှုကို ဘယ်တော့မှ လက်တုန့်မပြန်သင့်တာကို လက်ခံသူဟာ မတရားမှုကို တခါတလေ လက်တုန့်ပြန်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကို ပြောတာ။) ဒီတော့ ဒီမတူတဲ့အယူနှစ်ခုကို စွဲကိုင်သူတွေ တဘက်ကတဘက်ကို ရွံ့ ရှာမုန်းတီးပေမပေါ့။ (ကိုယ့်ဆရာက you are either with us or against us လို့ပြောချင်ပုံရတယ်။ George Bush ကဒီစကားကိုသုံးလို့ လိုက်သုံးရတာ အောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အယူအဆတခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား လက်ခံရမဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ငြင်းရမဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုရင် ဒီစကားဟာ George Bush သုံးပုံမျိုးလောက် မဆိုးဘူးလို့ ထင်မိတယ်။) ဒီတော့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှဖြေ Crito၊ ဒို့ရဲ့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဒီကနေစရအောင်။ မတရားလုပ်တာ ဘယ်တော့မှ မမှန်ဘူး၊ မတရားမှုကို မတရားမှုနဲ့ လက်စားမချေသင့်ဘူး၊ မတရားအလုပ်ခံရလို့ ကိုယ့်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ထိခိုက်ထိခိုက် ကိုယ်ကပြန်မတရားမလုပ်ရဘူး၊ အဲ့သလိုလုပ်တာမမှန်ဘူး ဆိုတာ ယုံကြည်လား၊ သဘောတူလား Crito။ ဒီကနဦးမူ starting principle ကို လက်ခံလား၊ ကန့်ကွက်လား Crito။ ငါ့အတွက်ကတော့ ဒီမူဟာ ဟိုးအရင်ကလည်း မှန်တယ်။ ခုလည်း မှန်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မင်းအမြင်မှာ တမျိုးဖြစ်နေရင် ထုတ်ပြော၊ ငါ့ကို ပညာပေးချေ။ ဒါမှမဟုတ် ငါပြောခဲ့တာကို လက်ခံတယ်ဆိုရင် ခုဘာဆက်ပြောမလဲ နားထောင်။’
Crito: ‘ကျုပ်ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လက်ခံတယ်။ ဆက်ပြော။’
Socrates: ‘ဒီတခါ မင်းကို ကိုယ်မေးမယ်။ တယောက်ယောက်ဟာ နောက်တယောက်ယောက်နဲ့ သဘောတူညီမှုလုပ်ထားရင် ဒီသဘောတူညီမှုဟာ တရားတယ်ဆိုရင် ဒါကိုစောင့်ထိန်းရမလား၊ ဖောက်ဖျက်ရမလား။ (social contract နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးခန်း စပြီထင်တယ်။)
Socrates: ‘ဟုတ်ပြီ၊ ဆက်ပြောမယ်။ မြို့ ကို မပြောဘဲ ဒီကနေ ဒို့ထွက်ခွာသွားတာဟာ (မြို့ ဆိုတာထက် မြို့ ပြအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့  သဘောတူညီချက်မယူဘဲ ထွက်သွားတာကို ပြောချင်ပုံရတယ်။) တစုံတယောက်ကို ထိခိုက်စေသလား၊ အထူးသဖြင့် မထိခိုက်သင့်ဆုံး လူတွေကို (ဘယ်သူတွေလဲ စဉ်းစားစရာ) ထိခိုက်စေလား၊ မထိခိုက်စေဘူးလား။ (ဒီလိုထွက်သွားတာဟာ) တရားတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ဒို့က စောင့်ထိန်းတာလား၊ မစောင့်ထိန်းတာလား။
Crito: ‘ခင်ဗျားမေးတာကို ကျုပ်မဖြေနိုင်ဘူး Socrates။ ကျုပ်မသိဘူး။’
Socrates: ‘ကဲ ဒါဖြင့်ရင် ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်။ ဒို့ဒီကနေ ထွက်ပြေးမဲ့ဆဲဆဲမှာ အေသင်မြို့ ပြရဲ့အဖွဲ့အစည်း အသိုက်အမြုံ (community) ပဲခေါ်ခေါ် ဥပဒေပဲ ခေါ်ခေါ် ဘာပဲ ခေါ်ခေါ် ဒို့ရှေ့ မှာလာရပ်ပြီး ‘Socrates သင်ဘာလုပ်မလို့လဲ။ ခုလို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခြင်းဖြင့် သင်ဟာ ဒို့အားလုံးကို၊ တရားဥပဒေတွေကို၊ ဒို့အသိုက်အမြုံကို ဖျက်ဆီးဖို့သက်သက်ကို ကြံရွယ်နေတာပဲလား Socrates။ မြို့ ပြတခုမှာ ချမှတ်လိုက်တဲ့ စီရင်ချက်ဟာ ပုဂ္ဂိလက နိုင်ငံသား (private citizen) တယောက်ယောက်ရဲ့ ချိုးဖျက်မှုကြောင့် အင်အားဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဆိုရင် အဲဒိမြို့ ပြဟာ မပျက်မစီးဘဲ ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့လား Socrates’ လို့ မေးပြီဆိုပါစို့။ (အရမ်းအရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ စာပိုဒ်တွေလို့ ယူဆပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို 50aကနေ တောက်လျှောက်ဟာ social contract ရဲ့ ရှေ့ ပြေးတွေဆိုတာ ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပါကုန်။)
« Crito 3
ကျကျနနရေးထားတဲ့ ဖီလော်ဆော်ဖီ အကြောင်း »